Kedu ụzọ iji nweta backlinks na ebe nrụọrụ weebụ m?
Backlinks na-eje ozi dị ka ndụ nke ọbara nke njikarịcha njikarịcha ma kpọọ isi ọrụ na search engine njikarịcha egwuregwu. Ọ bụ ya mere ndị ọkachamara SEO ji etinye aka n'ụdị njikọ ụfọdụ ma ha na-agbaso ntuziaka Google ma ọ bụ. Ụzọ mgbasa ozi nke njikọ njikọ gụnyere ụlọ ọrụ ndị ọbịa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, bọtịnụ blog, mkpọsa mgbasa ozi na ụgwọ njikọ - oculos ray ban dourado.
Usoro ụlọ ọrụ ndị a nwere ike inye aka mee mgbalị SEO ma ọ bụ bibie ha. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ na-ewere okwu ndị bụ "SEO onyinye" dị ka ebe nrụọrụ weebụ ha na-arụ ọrụ ogo. Otú ọ dị, eziokwu dị mwute banyere ya bụ na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-ewuli elu njirimara njikọ profaịlụ, ọ dịghị nkwa na ị ga-enweta ọkwa dị elu nke search engine.
N'isiokwu a, ị ga-ahụ ụfọdụ ihe kpatara njikọ ndị ọzọ na-apụghị imetụta ọnọdụ gị n'ọkwá ọnọdụ ọchụchọ.
Gịnị mere ị ga-esi nweta redlinks na saịtị gị abụghị mgbe niile?
Ọ bụrụ na ị na-enweta njikọ ndị ọzọ na saịtị gị site na ụzọ aghụghọ, ọ gaghị eme gị nke ọma. Ntughari backlinks dị ala site na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ agaghị enye gị aka na SERP. Ọ bụghị naanị na saịtị gị ga-ebute na nsonaazụ TOP na Google, mana ị na-echekwa na ị ga-eme ya.
N'ụbọchị anyị, webmasters maara banyere ihe ize ndụ sitere na backlinks spammy dị ka njikọ ndị ọzọ sitere na ugbo njikọ, ihe ntanetị spammy, mgbasa ozi mgbasa ozi na ihe gbasara isiokwu. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ, karịsịa ndị bụ ndị ọhụrụ na mpaghara a, nwere ike ịda maka ụzọ dị mfe iji nweta ọtụtụ ihe njikọ njikọta na ebe nrụọrụ weebụ ha n'ime oge dị nkenke. M na-ekwusi ike izere usoro aghụghọ ọbụla njikọta dịka ugbu a Google ghọtakwara na ọ nwere ike ngwa ngwa chọpụta ihe niile na-emebi iwu na ikpe ha. Ị nweghị ike ịma otú Google ga-esi kọwaa nke a ma ọ bụ backlink. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eleghara bọtịnụ anya na-eleghara njikọ sitere na ebe nrụọrụ weebụ spammy ma ghara ịgụ okporo ụzọ n'aka ha.
Iji nweta nsonaazụ a na-ahụ anya site na mgbasa ozi njikọ njikọ gị, ịkwesịrị ijide n'aka na ị na-ewu njikọ sitere na saịtị ndị - ikike, dị mkpa maka niche ahịa gị, nke a pụrụ ịtụkwasị obi, nke na-edekọ aha na nke ndị ọzọ, ebe kwesiri ntukwasi obi na ndi mara aha.
Nkwenkwe ọzọ a na-ahụkarị na nke a bụ na ịnweta redlink site na otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ TOP dị ka onye ọchụnta ego, Forbes ma ọ bụ New York Times nwere ike ịmepụta ngwa ngwa na ebe nrụọrụ weebụ na SERP. Ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-arụ ọrụ. Njikọ a nwere ike inyere aka na saịtị gị iji bulie elu ma wetara gị ọtụtụ okporo ụzọ ndị a gbanwere ma ọ bụ enweghị mmetụta na mpempe akwụkwọ gị ma ọlị.
Ihe anyị na-enweghị ike ịmara bụ njikọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ maka nyocha ọchụchọ n'ihi na Google nwere ike ịkọwa nke a na ọ bụghị 100% ma ọ bụ nweta njikọ dịka akwụ ụgwọ.
Otu ọnọdụ ahụ nwere ike ịchọta ya site na mkpesa blog. N'ọnọdụ ụfọdụ, njikọ ndị a na-eweta ọtụtụ uru na saịtị gị, ma mgbe ụfọdụ, a na-akpọ ha dịka ihe ndekọ gbasara azụmahịa gị. Ihe nzacha bu nke gi nwere ike weputa ihe di iche na ebe gi.